Online Juction Feed: 2015-04-12
पाँस्सा : बरुण पोखरेल
पैसाको मुख बिरलै देखिन्त्यो । नोठका त के कुरा गर्नु र ! एक सुका गोजामा भए कसैलाई भाउ दीइन्थेन । घरा'ट त सुको दिन्थेनन । कैले काहीँ यस्सो मावल गैयो भने चाँही पैसा जाबो त छेलोखेलो हुन्त्यो । मावल बाट फर्केको केही दिन सम्म त अरु केटाहरुको पछी लाएर जिम्मालको घोँडाको पछी पछी कुँद्ने नि गरीइन्थेन । हामी भन्दा पछील्लो पुष्ता टेक्टरको पछी पछी कुँद्यो, हाम्रो पुष्ता चाँही जिम्मालको घोँडाको ।
हाम्रा गोजाँ एक रुप्पे हुनलाई चोर्नै पर्थ्यो । नत्र काँबाट आउनु र तेत्रो पैसो । एक सुका गोजाँ हुँदा त दुई चार जना केटाहरु पछी लाग्थे मिठाइँ खान पाइने भओ भनेर । तर एक पैसाको चाँही खास्सै भ्यालु थेन । यसो यदा कदा पाइन्थ्यो गुराँसको चित्र भएको एक पैसा । पाँच पैसा चाँही बडो ब्यापक थियो । हामी खोपी खेल्ने ठिनी नै पाँच पैसाको हुन्त्यो । कती पटक पाँच पैसा ठिनी खोपी खेल्दा भुट्टाना टाँट्टाना परेर एक मोहोर एक रुप्पे सम्म हारेको रेकर्ड हुन्त्यो। त्यो पनि नखत काँ हो र ! उधारो । त्यै नि तिर्न नसकेर लुक्दै हिन्न पर्नी !
नाकाँ सिगानका लुर्का, कमिजका बाउला सिगान पुछ्दा पुछ्दा कट्कट्टेर कक्रक्क परेका हुन्ते । जाएँमा सधैं पछाडि दुइटा भैरबका आँखा हुन्ते । दर्जिकोमा लगेर टालो हाल्यो त्यै नि निलो जाएँमा कैले कालो टालो कैले रातो टालो अजिबको हुन्त्यो । आजभोलि भए त क्या गज्जब फेसन हुन्त्यो होला ।
ब्यान आटो खायो, काम लाइदे काम गर्‍यो नत्र खेल्न हिँड्यो । गुच्चा त धेरै ठुलो भएसी मात्र देखेको । रिठा खेलिन्त्यो । पैसा नभएर टाँकको खोपी नि खेलिन्त्यो । टाँकको फुक्का खेल्न अझ टेस पर्त्यो । त्यसैले कमिजका त के ! जाएँका सम्म टाँक सकिन्थे खोपी र फुक्का खेली-खेली ।
यसो कतै कैलेकाहीँ पैसा भेटिन्त्यो बाटाँ । ठुलो हैन 'पाँस्सा' । (पाँच पैसालाई धेरै चलन चल्तिको हुनाले छिटोछिटो भन्दा अपभ्रम्स भएर पाँस्सा बनेको थियो)
पाँस्सा भेटियो भने त दाँयाँबायाँ नहेरी गुरुरुरु खाली खुट्टा टाँक नभको कमेजको फेर हावामा फर्फराउँदै खर्क तुले बुढाको दोकान तिर हुर्रीईन्थ्यो । बाटोमा भेटिने केटाहरु ले सोध्थे: काँ जान लाइस ?, यत्राको जबाफ दिनु नि !! केइ नबोली बत्ताउँदै कुँदिन्थ्यो, केटाहरुले मेसो नपाई नपाई पछी पछी कुँद्थे । दोकान सम्म पुग्दा कैले त आठ दश जना केटा पुगिसक्ने । एकै सासमा तुले बुडाको दोकानको ढोकामा रोक्केर स्याँ स्याँ गर्दै मुठिमा च्याँप्या पाँस्सा फुत्त बुडाको काखाँ फाल्देर 'रातोमिठाइँ!' भनिन्थ्यो । बुडाले डब्बा बाट निकालेर एउटा रातो मिठाइँ दिन्थ्यो । बाहिर आएर कमिजको फेरमा मिठाइँ बेरेर दाँतले टोकेर फुटाएर, पछी लागेका सबै केटाहरुले बराबर भाग लगाएर खान्थिम । एउटाको भागमा लग्भग एउटा गहुँको गेडा जती पर्थ्यो होला । टप्प जिब्रामा राखेर च्वाप्प मुख मिठाउँदै खुप टेसले खाइन्थ्यो । पिपलगेडी एक रुप्पेका शय वटा आउँते, रातो मिठाइँ चाँही एक रुप्पेका बीस वटा । तर पिपल गेडी भन्दा रातो मिठाइँ नै मिठो हुन्थ्यो र शय वटा पिपलगेडी भन्दा मात्रा नि केही बढी हुन्थ्यो । त्यसैले सबैको प्यारो रातो मिठाइँ (रातो डल्लोमा सेता धर्का भएको) नै हुन्थ्यो ।
पैसाको मायाँ कहिल्लेइ लागेन, तर लोभ भने असाध्यै लाग्यो । मैले पैसा सानैमा चिनिसकेको थेँ जस्तो लाग्छ । एक पटक मावल सप्ताहा लगाएका थिए । म जेठो नाती उर्फ मावलका हजुरबा हजुरआमाका सन्तानका तर्फबाट केटा तर्फको जेठो । आफ्नै खुदका मामा थिएनन् तर नि मामाहरुको कमी थिएन र छैन पनि । मावली गाउँमा चिनेजतीकाले भान्जा नै भन्चन । अझ अचम्म त गाउँमा आफु भन्दा दश बर्ष कान्छाले नि 'ओए !, तँ ' भनेर बोलाउँचन । तर मावल तिर गएसी चिन्ने नचिन्ने आफु भन्दा तिस चालिस बर्ष बुढाले सम्म भान्जा 'तपाइँ' भन्चन । आत्म सम्मान भन्दा नि लाज पो लागेर आउँच । सप्ताहामा मै हिरो नि ! भर्खरको फिस्टे थेँ । गणेश बनाएका थिए मलाई सप्ताहामा । तर मलाई खासै टेस परिरको थेन । पूजारिका छेउँमा धुम्म परेर बसिरहनु पर्थ्यो । कथा बाचनको हरेक पूर्णबिराममा 'हरे~~~ !' भन्दै अरुले हात हातमा जोडेका फुलका थुङ्गा जग्गेमा फाल्दा आफ्ना उल्फट्याङ दरौँलेहरुले परालका गुजुल्टा फाल्थे । आफुलाई नि तेसै गर्न मन लाग्थ्यो तर जग्गेमा कुँजिएर बस्नु पर्ने । थुक्क गणेश !
सप्ताहा सकियो । सबैलाई टिको लाएर पैसा दिन थाले । मेरो नि पालो आयो । दिपका मामाले (दिप = आमाका जेठाबाका छोरा, दिप भन्ने टोलमा बस्नाले दिपका मामा) यत्रोबोडो सुपा(नाङ्ला) भरी पैसा ल्याएर टिका लाइदेर भने : लौ भान्जा रोजेर एउटा नोट लैजानुस् !
मलाई त रिँगटा लायो, भनन्न भयो । हजार, पाँच शय , एक शय देखी लेर एक रुप्पे सम्मका नोट थिए । कुन टिपौँ टिपौँ भयो । एक्छिन घोरिएँ । आफ्नो उमेर र औकात सम्झिएँ अनी यसो सुपामाका नोट केलाएँ र अली नयाँ खालको दश रुप्पेको नोट टिपेँ । मलाई थाहा थ्यो पैसाको भ्यालु । त्यसैले मैले मेरो औकात अनुसारको पैसा लिएको थिएँ आँफै छानेर । म जत्तिको मान्छेले दश रुप्पे भन्दा बढी लोभ गर्नु हुन्न भनेर । बडो बिचार पुर्याएको थिएँ । पैसाको लोभी आरोप नलागोस भनेर । किन कि शय भन्दा माथिको लिएको भए पछी फिर्ता माग्थे या बाउ आमाले मैले राख्दिन्छु भनेर दम्पच पार्दिन्थे, आफ्नो हातमा शुन्य लाग्थ्यो । बिस र पचास् लिएको भए त्यसबाट एक-एक रुप्पे मासेको नि घरमा हिसाब देखाउनु पर्थ्यो । त्यसैले दश रुप्पे लिएँ । तर अर्थको अनर्थै लाग्यो । हाम्ले त भान्जा ट्यालेन्ट होलान भनेको त हुस्सु पो रहेछन । नयाँ नोट भए हुने रहेछ । पैसाको भ्यालु थाहा रहेन्छ भन्न थाले । अन्तमा मैले आफुले दश रुप्पे छानेको कारण खुलाउनु पर्‍यो । त्यै नि कसैले पत्याएको भए पो !
पहिलो ममः बरुण पोखरेल
सधैंको एउटै रुटिन । बिहान उठ, आँखा मिच्दै धारामा जाउ, पालो बस, पानी ल्याउ चार पाँच खेप दनादन । पछाडि बाँसा' सुपिलो (खोइलो) लगाउ, चुइने गाग्री पछाडि धारा लाउँदै । चप्पल भिजेर माटो मिसिएर चिप्लेर उस्तै आपत । घर आइपुग्दा पानी गाग्रीको घाँटीबाट तल लागिसकेको हुन्थ्यो । छोत्ल्याङ्-छोत्ल्याङ् गरेर गर्धन तिर नि चुत्रुक्कै । कैले चिया खान पाइन्थ्यो, बासी भात बचेको भए त्यहीँ चियाको सितन, कैले मकैका रोटी । टाप्टुप पार्यो घाँस-दाउरा हिँड्यो । फर्केर आयो, चिसो भैसकेको आटो दन्कायो फेरी गोरु फुकायो चल्यो ग्वाल । खेत-बारीको काम भए घाँस दाउराको रुटिन क्यान्सिल, बिहानै धन्धा सक्यो आटो खायो चल्यो खेत-बारीमा । दिक्कै लाग्दो । सधैं उस्तै ।
कहिले काहिँ त यसो घर छोड्न पाइयोस, अझ उस्तै परे गाडी चढ्न पाइयोस । मुख फेर्न पाइयोस, होटेलको भात खान पाइयोस । सम्झँदा मात्रै नि खाएकै जस्तो आनन्द आउँत्यो ।
त्यसैले घरबाट फुत्किने बहाना खोजिन्थ्यो हरदम । कैले सफल भैन्त्यो कैले असफल । घरबाट फुत्किन पाए नि माओल-फुपुको घर टाइप चाइँ फेरी झन दिक्क लाग्त्यो । ताप्के बाट उम्केको माछा फेरी भुङ्रोमा । त्याँ गएर झन सोब्बर बन्न पर्त्यो, अनी काँ'ण स्वाल्लाउस् !
आफ्नु स्तर एसएलसीमा झाम्टे (एक्जेम्टेड) भए नि घरकालाई चाइँ छोरो डाक्टरै बनोस्, इन्जिनेरै बनोस् लाग्नी । घरको र आफ्नो स्तर जोखाना हेरेर घरकाको चाइँ सिएमए सम्म पढेर गाउँको छोटे डाक्टर सम्म भए नि बनोस् । फल्ना छोरो सिएमए डाक्टर भनेर गाउँमा चिनियोस्, सान्सानो मेडिकल दोकान नि होस्, भन्नि चाहना बडो गहिरो थ्यो । आफुलाई फेरी डक्टरी भन्दा बित्तिकै आँफैलाई तीन बित्ताको ज्वरो आउँत्यो । बरु हलो जोतेर खाइन्च, यो पिप निचोर्नी काम गरिन्न भन्नि द्रिढ अडान लेर बसिया थ्यो । तर क्यार्नु ! घरकाको नि मन राख्दिनै पर्नी ! कैले काइँ त्यै मन राख्दिनी कार्यले नि यसो मुख फेर्नी र जिउ तन्काउनी अवसर चाइँ प्रदान गर्त्यो ।
चौराँ गोरु चराउँदै केटा'रु सँग डन्डी बियो खेल्दै गर्या बेलाँ कता'ट पार्द्या दामे छ्यास्स आयो र ओई! यौटो कुरो सल्ला गर्न छ तँ सँग ! भनेर छेउँमा लगेर 'चुत्राबेसीमा सिएमए खुल्दै छ रे प्राइभेट । जानी हो त बुझ्न ? स्वाल्लाए पढम्ला, नलाए बुझे जस्तो गरम्ला, घुमम्ला फर्किम्ला!' भन्यो । यसो सोँचेँ, कुरो नठिक हैन । मनमा लड्डु फुरे। बेल्का घराँ सल्ला गरेर भोली खबराम्ला भनेँ।
बेल्की भात खाइसकेपछी घटना र बिचार सुन्दै गरेका बाउको छेउँमा गएर टाउको कनाउँदै कुरो पसारेँ । बाउको सुरुको प्रश्न : कती लाग्नी रैच ? सुक्या स्वरमा : केइ थाहा छैन, यै साल देखी सुरु रे । फारम खुल्या छ रे । सबै बुझेर अउँचु । बुडाको ताल देख्दा पर्दैन भो ! भन्चन जस्तो लाथ्यो, एक्छिन सोँचे जस्तो गरे, जान्नस! जा बुझेर आइजा ! भने । एक्छिन त खुशीले सनन्न भओ । बुडा बुडीलाई तिर्थ बर्त जानी भन्दा अझ खुशी लाओ मनाँ ।
अर्को दिन हिँडियो ब्यानै उठेर झोला बोकेर । टाढाको बाटो, पैदलै गए पनि बजार जस्तो ठाउँ, अर्नीपानीको लागि डेढ शय रुप्पे जती द्या'थे घरबाट । पैसो जाबो छ्याल्ब्याल । तर दामे बाट चाइँ जोगिन पर्त्यो । ब्योरा ठीक थेन त्यस्को । फकाइ फकाइ धुत्थ्यो । दुइटै उस्तै अल्लारे झल्लु । हल्लिँदै चिच्याउँदै ढुङ्गा फाल्दै चुत्राबेसी नजिकै पुगियो साँझ । फुपुको घर थियो । जात्तिबिती मोय गर्नी फुपु । दुइ जना त्यैँ बास बसियो । अर्को दिन ब्यान झरियो चुत्राबेसी सिएमए सेन्टर खोज्दै । मलाई त खासमा पढ्न मन थेन । दामेलाई था'भएन । शायद त्यस्लाई नि पढाई सढाइमा इन्ट्रेस थेन ।
सोध्दै खोज्दै सिएमए अफिसमा पुगियो । यसै त काँ पढ्ने मन थ्यो र ! त्यस्मा पनि त्याहाँका कर्मचारीको व्यबहार ! बुझ्न आका हम् ह्याँ सिएमए खुल्या छ भन्नि थाहा पाएर भनेर सोध्दा कर्मचारीहरुको व्यबहार सिधै काम माग्न आए भन्दा कम् लागेन । सिधै फाराम दिएर फाराम चार्ज मागे । गोजाँ पैसो नि थेन, बुझ्न मात्र गएका हामी, काँ फारम भर्नु ! फारमको कागज समाएर पढाई खर्च, सुबिधा, पढाई सिस्टम सोध्यौँ । मोटामोटी हिसाब बताए, करिब डेढ लाख । दुइटैले जिब्रो टोकिम । हस् ! फारम भरेर फेरी आउँछौ भनेर लागिम बाटा । पचास्- साठी हजार जती होला भन्ठान्या त तेत्रो महङ्गो ! ढुक्क भैयो, यती भएसी त हाम्ले पढ्छम भने नि घरकाले पढाउन्नन यत्रोनी !
दिन्भर घुमियो त्यतै बजारमा रमाइ रमाइ । हामी गाम्लेलाई बजार ! अली ठुलो घर देखे नि 'एब्बा नि !' भन्या छ। बस, टेक्टर आए नि घुम्तीमा पुगेर नछेकियुन्जेल हेर्या छ, समय गएको पत्तै नाइ !
त्यस दिन दाम्या माओल जानी प्लान थ्यो । माओल चुत्राबेसी बाट गोरुसिँगे जाने बाटो तिर घुम्ती भन्ने ठाउँ देखी सर्लक्कै माथी डाँडामा । साँझ झमक्क भएसी तेस्का माओल पुगियो । दामे -भान्जा, म -भान्जाको साथी । हल्का मान मनितो पाइयो । अर्को दिन ब्यान हिँड्ने बेलामा टिको लाएर पैसा नि पाइयो । आज घर फर्कने दिन थियो । खर्च पानीको जुगाड बेस्सरी भयो ।
फर्केर चुत्राबेसी (सन्धिखर्क) आउँदा मध्यानह भएको थ्यो । गोजाँ पैसा थ्यो, भोक लाग्यो । सन्धिखर्कको गल्ली गल्ली हिँडिरको बेलामा साइनबोर्डमा 'रेसुङ्गा मम सेन्टर' भन्ने यत्रोबोडो साइनबोर्ड देखियो । ओक्खो ~~~ यो त बडो सुनिराख्या नाम हो । अझ काठमाडौं तिरकाले खानि चिज । ममको बारेमा थाहा पाएको पत्रीकाहरु हेरेर । पत्रीका आउने जम्मै काठमान्डु तिर बाट । गाउँमा खाएको कसैले थेन । तर मम भन्नि खाने चिज हो भन्ने बडो आधुनिक नाम बनेको थियो । अहिलेको अवस्थामा भन्दा देख्नु न भोग्नुको तर नाम सबैलाई कन्ठै भको 'नयाँ संबिधान' जस्तो ।
लौ दामे !! मम खाम हेर !
दामे एक्छिन अक्मकायो । नाम त सुन्या हो खुपै । कैले नखाको चिज, कस्तो हुनी हो ~~~ , खानि र ?
ह्या ~~ मम खाइयो भनेर फुर्ती लाउन पाईन्छ जाँटा गाउँमा गएर ! दन्काइदिम !
लौ तो यत्रैसीत ! तैँले भनिस, खाइदिम !
छिरियो भित्र ।
भित्र त छिरियो, कोइ ग्राहक छैनन । हामी मात्र । भक्खर १२ जती बज्या थ्यो होला । बेन्चमा बसिम । साउजी आएर सोध्यो : के खाने ? (मम सेन्टर भए नि अरु थुप्रै आइटम थे मेनुमा)
मम खाने दुई ठाउँमा । (प्लेट भन्न नि आएन । प्लेटमा खानि हो कि कपमा हो कि थालमा हो कि के मा खानि जिनिस हो भन्नि थाहा थेन । कतै चित्र समेत देखिया थेन ।) तर साइनबोर्डमा प्लेटमा बाफ पुत्ताउँदै गरेका डल्लाको चित्र थ्यो । अनुमानले मम भनेको यै होला भनेर लख काटेका थ्यौँ ।
हस् ! भनेर साउजी छिर्यो भित्र किचेन पट्टी ।
आउला खै, आउला खै ~~ साउ बाइरै निस्किन्न । दिक्क लाइरख्या थ्यो । साउ आयो दुइटा यित्त्रै बटुकामा आधा जती तातो पानी लेर । टेबल अगाडि राख्द्यो, हिँड्यो । यसो हेरिम, धनीयाका पत्ता छन्, सङ्लो पानी छ । त्यो पनि यित्ती थोरै । हामी त हेर्या हेर्यै भैम् । यै हो त मम भन्नि ?! दामेले मलाई सराप्न थाल्यो, खुप मम खाम भन्तिस नि ! इस् खा मम ! मेरो बोल्ने बाटो नै रहेन । बटुका सँगै बियरको बत्तल नि ल्याएर राख्दिएको थियो । यसो हेरिम, बत्तलको बिर्को खोलेको छैन, दुलो पारेको छ । छेरेर दिसा नधोएको जस्तो लतर पतर छ बिर्को ओरिपरी । चट्नी होला भन्नि अनुमान लाइम, तर कस्तो कन्जुस पारा हो ! बिर्को नि नखोल्या, के सुँघ्दै खाँदै गर्नी होला त त्यत्रो दुला बाट ?! खास खुस कुरा गर्दै आँफैले आँफैलाई सराप्दै बसिम । इस् खाइस मम भन्दै । त्यै नि आशा मरेको थेन । मुल्य रु १२ लेखेको थियो । १२ रुप्पेमा यस्तो झोल मात्र देर त यत्रोनि टार्दैन हेर ! आउँछ होला के ! पर्खे एक्छिन । इस् आउँच ! यो झोल ल्याइदेको आधा घण्टा हुन लाइसक्यो । कैले ल्याउँच ! सानो स्वरमा खास्खुस बादबिबाद गर्दै त्यै झोल भए नि खाउँ भनेर चम्चाले सुरुप सुरुप पार्न थालिम् । खासै टेसिलो थेन, अलिअली नुनिलो, धनीयाको गन्ध आउने । फसियो केटा फसियो । बडो मम खाइ टोपल्नी भका !
यसो पारी हेरेको चुत्राबेसी बाट किम्डाँडा तिरको उकालोमा टेक्टर् ध्वाँर् ध्वाँर् गर्दै उकालो चढ्दै थ्यो । त्यो टेक्टरको ट्रलीमा बस्न पाएको भए आधा बाटो हिँड्न पर्थेन । मध्य दिउसको टन्टलापुर घाममा । बडो दु:ख लाओ । यै ममको कारणले टेक्टरमा चढ्न पाइएन । ममले डुबाउनु डुबाओ ।
एकछिन पछी साउ आयो दुइटा प्लेट लेर । प्लेटमा सेता सेता डल्ला भब्र्याल्तै, पुत्तौँदै । यास् ! बाइर बोर्डमा देखेको त यो पो हो त !! अब फेरी समस्या पर्यो । ति सेता डल्ला त्यो धनीयाको झोलमा मुछेर खान पर्नी थ्यो कि चोपेर केइ मेसो पाइएन । झोल त लग्भग सकिएको थियो । साउले यसो हेर्यो सुप ल्याइदिउँ अली ? भन्दै बटुका टिपेर लाग्यो । अब मुखामुख गर्न थाल्यौँ । यस्तै त होला खानि भनेर काँटाले घोँचेर एक एक डल्ला मुखाँ के हाल्या थ्यौँ, निल्नु न ओकेल्नु बनायो । आगोका कोइलै उठाएर ल्याको जस्तो तातो । मुखको माथिल्लो डाँडी, गाला जिब्रो जताततै पोल्यो । तर देख्दा जती मिठो होला जस्तो लाग्या थ्यो त्यती मिठो लागेन खासै । साउले फेरी सुप भनेर धनीयाको झोल लेर आयो । उस्ले बुझ्यो यिनिहरुलाई थाहा छैन नयाँ हुन् भन्ने । यो सस हो । यसरी प्लेटमा झारेर चोपेर खानु पर्च भन्दै बत्तल घोप्टो पारेर बत्तलको पिँधमा थ्याँच थ्याँच पार्दै हत्केलाले हानेर अचार् प्लेटमा झार्दियो । थाहा नभएको कुरो त सोधेको भए नि बताइदिन्थ्यो होला साउजीले । हाम्लाई सोध्नै लाज लाओ । अब मम चोप्दै खान थालिम् भकाभक । नाम मात्र ठुलो रैच । मिठो त समोसा जत्तिकै नि हुनी रैन्च । यस्तै रह्यो ममको पहिलो अनुभब ।
मुनामदन - लक्ष्मीप्रसाद देबकोटा
अरु ता मैले के गर्न सक्थेँ ! अपढ(अज्ञानी,
घाम र छाया(बीचमा फुल्यो मनको फूलबारी,
आँसु र हाँसो मिसाइदिन्छ सबका घरको ।,
जो मैले गुँथेँ पहिर भाइ ! पहिर बहिनी !,
प्रेमका गलामा नवैलिजाओस् भक्त हुँ म पनि ।,
नेपाली माटो स्वर्गको किरण भरेर झन्क्यो मूल,,
नेपाली वास्ना भएर निस्के अत्तर देशी फूल,,
एकान्त वनमा फूलपरी रङ्गमा पस्सिए फुर्फुरी,,
एक लहर टिपी चढाएँ, नाचून् छातीमा हरघरी ।,
नदेख्ने वन कविको मन रङ्गले छर्किन्छ,,
जीवनको छायादेशमा एउटा फूलबारी हुर्कन्छ,,
आँसुको जाल डालीमा हाली विन्दुले रसाए,,
कल्पने माली, अम्लान कुसुम,,
एक डाली गुँथी, गलामा फाली,,
जोड्दछु हात हे भाइ(बहिनी ! बास्नामा रसाए,,
स्वप्नाका धन नबाँडीकन हुँदैन खुशी मन,
आनन्द मेरो लखगुना होला सकारे समर्पण !,
सज्जनवर्गका प्रति :
क्या राम्रो, मीठो नेपाली गाना भ्mयाउरे भनेको !,
यो खेतभित्र बिरुवा रोपेँ नदेखि खनेको !,
फुलेर जाओस् वैलेर जाओस् ईश्वर(इच्छा हो,,
पयरपनि नकुल्च, भाइ ! यो मेरो भिक्षा हो ।,
यो फलिजाओस् ! यो फैलिजाओस् ! वसन्त डाकन,,
झ्याउरे भनी नगर हेलाँ हे प्यारा सज्जन !,
नरम गररोस्, चरम(चुली उडाई पु¥याओस्,,
निर्मल नाला(लहर जस्ता अगर चलाओस्,,
पहाडछातीमा पो टम्मराओस् डाँडाले दोह¥याउन्,,
मन र वन गुँजेर उठून्, छहरा छहराऊन्,,
शहरभित्र एकान्त खोपी, यो गरोस् उज्यालो,
झोपडीभित्र यसैले बालेस्, मनको दियालो;,
नेपाली गेडा, नेपाली दाना, नेपाली रसले,
भिजेको मीठो रसिलो गीत, नेपाली कसले,
नेपाली भन्ने कसले त्यसै आँखा नै चिम्ललेला;,
प्रतिभाबाट छहरा छुटे, हृदय नछोला ?,
पर्वत, खाडी, फाँटमा चल्छ झयाउरेको लहरी,,
स्वदेशी माटो जागेर बोल्छ सरलमा छहरी,,
झुप्राका चरी, वनका परी, दिल भल बगाउँछन्,,
मासा र मासा जनका भाषा हावालाई रँगाउँछन्,,
नक्कली जीवन, कुटिल विद्या लिँदैन यसमा चाल,,
भावका वशमा पग्लन्छ रसमा जनको दिलको छाल;,
पहिलो कवि पर्वतको पानी निर्मल अधर,,
हिमाल सारा सङ्गीत धारा प्रथम छरर ।ं,
कराली टिपी जलबेली कल्क्यो जीवन(सागरलाई,
बोलूँ कि बोलूँ फूल फुट्न खोजे बास्ना दी अधरलाई,,
चरीले तर चुच्चाले च्यापी पहिलो पल्लव,,
झर्नाको स्वर टिपेर कुर्लि प्रकृति गौरव,,
तिनैका साथी नेपाली जाति घाम र पानीमा;,
ढुक्कुरे मुटु सजीव भै कुर्ले भ्mयाउरे वाणीमा,,
यो नीलो स्वर्ग पार्वती(माइती, छिरबिरे छाया(वन,,
भत्केर आउँछ जीवनको तार कुर्लन्छ चरी मन,,
प्रकृति(किरण रङ्ग भै दिलमा भावले छिर्केर,,
झर्नाको शीतल शीकर उड्छ स्वरमा सिर्केर,,
दुःख र सुख मिसेको रस जो जीवन कहिन्छ,,
रसको धर्म लिएर पग्ली गीतमा बगिन्छ,,
नेपाली सच्चा जातीय जीवन भ्mयाउरेमा बोल्दछ,,
कोदाली(तालमा, हलाको फालमा नाचेर खुल्दछ,,
नेपाली नसाभित्रको रगत पाउँदछ स्पन्दन,,
यो प्रकृत छन्द(बीचमा सुन्दर रमाउँछ नन्दन,,
जनको मुटुभित्रकी चरी स्वभावमा कुर्लन्छे,,
जनको जीवन(नदीकी लहर यसैमा उर्लन्छे,,
पहाडी वायुमण्डलको ध्वनि गोधुलि(वनको बोल,,
हिमालमा हुर्की, फूलरङ्गले छिर्की, बास्निन्छ अनमोल,,
श्रमको अमृत, प्रेमको पीयूष, जनको रसमा,,
दुःख र सुखको कराली पथ, जल(ज्योति(सम्झना,,
भ्mयाउरे हाम्रो जलको बाटो आँसुको कहानी,,
झिल्झिले नाला लहरबेली रुलाइ र मुस्कानी,,
जनको सच्चा साहित्य यही, जनको नाडी छन्द,
कविता(देवी झर्दछिन् यहीँ प्रकृत लिई बन्ध,,
जमीन यस्तो विशाल यहाँ न केही सह्यार,,
यो नयाँ जमीन बटार्न कोर्न बन्दो छु तयार,,
भ्mयाउरे कवि भनेर मेरो दुर्नाम ह्ुनेछ,,
जनको प्यारको चन्द्रमालाई कलङ्क छुनेछ ।,
युगल आर्को लिनेछ कोल्टो, भावना फिर्नेछ,,
खुम्चेका दिल फुकेर जालान्, अन्धता मर्नेछ ।,
मलाई सानो पातलो गाउँ पहाडी नालीमा,,
मसिनो सानो वनचरी(कुर्लून् जल बोल्ने थलोमा,,
शहरबाट सुदूर नीरमा मोहनी कुनामा,,
गन्धर्व परी नेपाली कुर्लून्, प्रकृत टुनामा ।,
हृदयले नै डो¥याई भाषा अर्थलाई मन्त्रेर,
मुटुको मलाई ढुकढुकी मीठो, कलेजा(कम्पन,
पेशाले बिग्¥यो कविको धर्म, शब्दले मम्र्मघात,
यो सानो भ्mयाउरे गीतको कथा नजर लगाई,
मदन भोट जाने बेलामा :
म बीसै दिन बसुँला ल्हासा, बाटामा बीसै दिन,
कि मरि छाड्यो, कि गरिछाड्यो मर्दको इरादा,
अनार (दाना दाँतका लहर खोलेर हाँसन,
नभन त्यसो ! बुझन मुना ! थ्ुँगा झैँ त्यो पाउ,
हालका मैला सुनका थैला, के गर्नु धनले ?
उनको यौटा पाटी र धाराको इच्छा पु¥याऊँ,
ल्हासाकी ठिटी, आँखाकी छिटी सुनमा कुँदेकी,
बुल्बुले बोली, गालाको बीच गुलाफ फुलेकी ।
ची सबै खेलून् ती सबै नाचून् डाँडा र चहुरमा,
आँसुको वर्षा हुनेछ शीतल दुःखीको पलकमाÞ
Þपिंजराभित्र जलेकी चरी नबोली रुनेछ
ठँुगेर डण्डी बत्तिई भने कहाँ पो हुनेछ !
वैलेर झर्ली नबाोली, बोली को सुन्ला उहाँ ए !
सवारी होओस् भन्नै त प¥यो मुख थुनी मुटुको
भुमरा(दर्शन त्यसमा पर्छ
तिरमिर छाया मुख बाउँछन् धुृइरा शीतले काँप्छ तन
तिमीलाई पाउन म दूर जान्छ्ु झन् आफ्m्नो समीप
तिमी ता मेरी जीवन(ज्योति बाटाकी दियाली
पर्वत(खाडी सागरले छेक्छन् प्याराका जोडी कुन ?
मदन भोट जान्छन् :
ल्हासाको शहर चम्कन्छ पथमा विचित्र झलक दी !
पकाई झिक्ता नखान पाई काँचाको काँचै भात ।८
८बाटामा सही अनेक कष्ट लक्ष्यको टुनामा
मदन ल्हासा झलमल देख्थे ब्यूँझिदो स्वप्नमा
ल्हासाको शहर चम्कन्छ पथमा विचित्र झलक दी ।
मैदानतिर पोतालामनि ल्हासा नै मुस्कायो ।
रङ्गीन ढ्ुङ्गा, अप्सरा सारी बुट्टामा चुँदेको ।
यूतोक स्याम्पा, त्यो पुल राम्रो त्यो ल्हासा झलमल ।
आँखाका काला, नौनीका छाला, त्यो ल्हासा शहरका ।
ल्हासाको शहर क्या लाग्दो रहर सुनको झलकमा !८८
८८ हिमालको आकाश किनारापारि बुद्घको शीतल घाम
ल्हासाको झल्के सुनका छाना उनका आँखामा,
बाटो त सा¥हो यमालो ठाडो कहीँ छ बित्ते भीर,
ढुङ्गाको दाँत,झन् तीखो बतास दा¥हा नै किटाउने,
शहरका सङ्गीत(कविताभन्दा बनेली अनमोल !
उषाले बाल्थिन् लखबत्ती(चुह्ली सुनौला ज्वालामा,
प्रकृति(मन्दिर सुनौला गजूर धप्के झैँ हजारौँ !
अमृत(जलप(निवास बन्थ्यो उमाको शीतल,
पीयूष(जलमा छायाको सार झल्के झैँ मञ्जुल ।
हिमाल(प्रदेश पार गर्थे मदन हृदय उचाली ।
बतासले दा¥हा किटेृर टोक्थ्यो साँझमा मुटुलाई
एक मैन्हापछि मदन पुगे ल्हासाको नजीक ।
पसु की फलू झँै सुकेर गइन् आँसु नै बर्सन्थ्यो ।
भ्mयालमा आँसु मुनाको मन चिन्ताको आहारा ।
सपनाभित्र उनलाई देखे उठ्न नै गा¥हो छ ।
गुलाबलाई देखेर राम्रो हे भाइ नछुनू !
लोभले हे¥यो; मोहनी गयो जङ्गली नहुनू !
ईश्वरको हाँसो पाएका फूल छोएर नमारÞ
Þभित्र छ आत्मा मसिनो तिनको पत्तीमा झल्केको
बिस्र्यो है क्या र ? हजूरलाई तरुनी(खासामा ।
आँखामा चम्क्यो बिजुली यौटा, चाँडै न ै हरायो ।
म अरु जस्तो नठान बुभ्mयौ हे नैनी भाउज्यू !
यो कुरा गर अरुका कान, जो सुन्छन् लिई चाख,
गुलाब जस्तो फुलेको दिल कोपिला हँुदैन,
जो एकबाजि सुम्पियो बुभ्mयौ सो आफ्नो हँुदैन ।
स्त्रीलाई जाँच चिताको ज्वाला पसेर निस्कँुला,
त्यो पाउलाई समाई फेरि स्वर्गमा बसँुला ।
के भन्न्ु माथि बाबुको अघि हिलोले बिगारे ।
दयाले नैनी ! ईश्वरले सिँगारे ।
पापको भारी बोकेर फेरि उक्लनु कसोरी
नभएदेखि सङ्घारवारि हे नैनी ! नआऊ !’Þ
Þ‘बिराएँ हजूर, माफ रहोस् कसूर’ नैजीले जोडी हात,
कस्तूरी(वास, सुनको रास, बाटो त उकालो,
मनमा आए लहर नाघी जङ्घार त¥यो पार,
छातीमा केले थिचे झैँ लाग्यो आकाश रछायो ।Þ
Þ छबीस दिन उज्याला पङ्ख िहिमालमा ब्यूँझेर
आपूmलाई चाहिनेसम्मको धन कमाए त्यहाँ नि !
आखती केह िलगेका थिए एक लामा धनीको,
आपूmले उनले चिताएभन्दा रास थियो सुनको,
लुकाई ग¥हांै सुनका थैली, कस्तूरी सह्यारी,
‘सपना मैले के देखेँ आज ? भैँसीले लघा¥यो,
यो मुटु काँप्छ त्यो भैँसी सम्झी, हिलामा पछा¥यो,
बज्यै ! भैँसीले लघा¥यो ।’
‘धेरै नै भयो खबर केही आएन ल्हासाको,
वनको बाटो डाँडा र काँडा, टाढा भै आएन ।’Þ
Þ‘नमान पीर बुहारी मेरी पीरले सुहाएन’
सुकेको पात भैmँ शीतको बेला,
हिमाललाई हे¥यो मन चीसो हुन्छ पर्वत है¥यौ नीर,
पूmल भैmँ छोयौँ संसार हाम्ले,
==(मदनलाई बाटामा हैजा लाग्छ)==
मानिसको आँसु मानिसले पुछ्न्ु सबैको धर्म हो ।
यो हैजा हाम्ले कु¥हेर बसे हुँदैन मङ्गल ।
चौँरीको दूध पिलाईकन बलियो बनायो ।Þ
Þहिमालको बूटी विचित्र थियो जादूको दियो काम
गोबरमाटे —फूल टाटेपाटे,
वनको कोही देव र देवी घुस्ने भैmँ सुटुक्क,
नकली ज्ञान पोथीका भन्दा, पूmल–पाना हँसिला
पूmलको बोट उम्रेको हेरी मान्छेले पाउँथ्यो ज्ञान,
रूखको ढुकढुक, पूmलको धड्कन,
चौँरीलाई पाली, फलपूmल हाली, बटुली जहान
बर्षमा बा¥ह गजबकौ तर जेहेन र कामको,
देखेर त्यहीँ बसूँ भैmँ लाग्यो सधैँ नै नजान
वैशाख लाग्यो पल्लवमा पन्ना, पूmलमा इन्द्राणी
जुनेली पूmल फक्रेर आए हृदय खोलेर
संसार मथ्दा जूनको नौनी स्वर्ग तर छ, सुखकोमा
दिन तारा(झुप्पे यो रुखमनि
पानीले पा¥यो आकाश नीलो, पखाली तुवाँलो,
मनको धन छाडेर किन ल्हासामा बसेको ?
पहाड त्यस्तो ! जङ्गल त्यस्तो पथरा प¥यौ कि ?
मलाई सम्झी दुःखमा नजर आँसुले भ¥यौ कि ?
प्यारा ! आँसुले भ¥यौ कि ?
विचित्र त्यस्ते त्यो चित्रकारी भ्mयाल र ढोकामा,
टाढाको घर झल्केर आयो हे दाज्ु ! मनमा ।
आफैेले खन्छ आफैँले खान्छ, सित्तैमा छुँदैन,
त्यो भोटेभित्र देखेर त्यस्तो मनको मुहान, रोएर घर हिँडे ती मदन !
छोराको म्ुख झल्झली देख्छिन्, ईश्वर पुकार्छिन्,
ल्हासाको तर्फ आमाको दिल बहाई बढ्दछ ।
नजर फि¥यो, पसीना पुछी बोले ती बटुवा,
‘सुबोल् सुबोल् हे ! ठाउँ सरी बस्न, आकाश(डुलुवा !
औँसीको कालो आकाश(छाना घरको माथि छ ।
बुहारी मूच्र्छा इन्तु(न(चिन्तु माथिको तलामा,
‘के देख्न आएँ ? हे मेरी आमा ! के देख्नुप¥यो नि ?
हे मेरी आमा ! हे मेरी आमा ! यो छाती चि¥यौ नि !
आमा ! यो छाती चि¥यौ नि !
मुटुमा गाँठो पारेर हेछर्यौ ! नजर फि¥यो नि !
नछाड आमा ! फर्क न , फर्क, टुहुरो म¥यो नि !
आमा ! टुहुरो म¥यो नि !
म आएँ आमा ! म द्ुःख दिन कोखमा पसेको !
कोपिलाभित्रै वैलायो आशा, हिउँले खँगा¥यो,
छाृराको मुख हेरेर गइन् कठै ! ती घुरुक्क ।
ल्हासामा जाँदा बिछोड परेमा !’
मागेर बिदा सबेैका साथ सा¥है नै बिरामी !
भएर गइन् सा¥है नै बिरामी !’
‘निठुरी दिदी ! निठुरी दिदी !! मा¥यौ नि मलाई !!!
म यहाँ अब बस्तिनँ म्ुना ! म यहाँ बस्तिनँ,
वैद्यले हे¥यो, वैद्यले बुभ्mयो, त्यो वैद्य आएन,
दिनका दिन झन् सा¥हा भए बिचरा मदन,
‘:हे मेरी दिदी ! यो घरजम तिमीले चलाऊ,
पाटी र धारा आमाको इच्छा तिमी नै पु¥याऊ ।
आँैषधि छैन हे मेरी दिदी ! फुटेको मुटुको ।’
+ ं+ +
संसार हाम्ले बुभ्mनु नै पर्छ काँतर नबनी ।
कर्ममै पुज ईश्वर भन्छ यो ‘लक्ष्मीप्रसाद ।’
Source : wiki books
* लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको खण्डकाव्य - "मुनामदन" को ई-बुक (pdf. format) मा डाउनलोड गर्नुहोस् ।
Labels: कविता, काव्य कृती
डायमण्‍डशमशेर राणाको सेतो बाघ - Download
"सेतो बाघ" डायमण्ड शमशेरद्वारा लिखित ऐतिहाँसिक घटनाक्रमा आधारित लोकप्रिय उपन्यास हो । हालै यस कृतिमा आधारित भएर नेपाली कथानक चलचित्र समेत बनिसकेको छ । "सेतो बाघ" को collection audio खगेन्द्र नेपालीको आवजमा डाउनलोड गर्न तलको डाउनलोड क्लिकहरुमा गर्नुहोस :
Episode 1 : Click Here to Download
Episode 2: Click Here to Download
Episode3: Click Here to Download
Episode 4:Click Here to Download
Summer Love | Nepali Audio Novel | Download Full Episode
Summer Love isafamous Nepali Novel book by Subin Bhattarai. The Summer Love's story mainly takes place in capital city Kathmandu Nepal whereafreshman lad Atit Sharma from eastern Nepal falls for another freshman Saya Sakya from Capital who was the topper in the entrance of the class. As the plot develops they share quality time during college and field visit around Pokhara and Chitwan and they are in deep love. At the climax Saya takes some unexpected decision and the story takes another twist compelling Atit to take some daring steps, will Atit and Saya be together at the end? will any of the character betray one another? To know all these appealing love sequences, separation factor and the heartbreaking climax listen below .
Download : Click Here to Download Episode 1
Download : Click Here to Download Episode 2
Download : Click Here to Download Episode 3
Download : Click Here to Download Episode 4
Download : Click Here to Download Episode 5
Download : Click Here to Download Episode 6
Download : Click Here to Download Episode 7
Download : Click Here to Download Episode 8
Download: Click Here to Download Episode 9
Download : Click Here to Download Episode 10
Download : Click Here to Download Episode 11 (Last)
Download : Click Here to download Episode 11 (Final) [Interview with Subin Bhatarai]
"मुक्तक माधुरिमा" (2071-12-26) - Download
मिति 2071 चैत्र 26 गते विहिबारका दिन रेडियो अर्पण १०४.५ मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताझैं विहिबार बेलुका ८.४५ मा BBC पछि प्रसारण भएको तपाईहरुको प्यारो साहित्यिक कार्यक्रम "मुक्तक माधुरिमा" डाउनलोड गरेर सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
Labels: गजलको अडियो
Labels: काव्य कृती
William Shakespeare's - "The Merchant of Venice" - Download
"The Merchant of Venice" isaplay written by William Shakespeare. Now you can download this ebook (in pdf. format from my site. click here to download.
Labels: play's ebook
ध्रुब सापकोटाको कथासंग्रह "उच्चारण" भित्रको दुई लोकप्रिय कथाहरु : "घात प्रतिघात" र "जिन्दगी - अर्थात टाइम्बम" - Download
"उच्चारण" ध्रुब सापकोटाद्वारा २०३५ सालभन्दा अगाडि लिखित कथासंग्रह हो । यस कथासंग्रह भित्र "घात प्रतिघात" र "जिन्दगी - अर्थात टाइम्बम" लगायतको २ लोकप्रिय कथाहरू समेटिएको छ । "घात प्रतिघात" र "जिन्दगी - अर्थात टाइम्बम" अडियो भर्सनमा डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
Labels: कथाको अडियो